ဓမ္မစကား | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
ဓမ္မစကား	# ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ နှင့် အနေကဇာတင် မင်္ဂလာPublished May 24, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	ကဆုန်လပြည့်နေ့ ဟာ အများသိကြတဲ့အတိုင်း မြတ်စွာဘုရား ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီး တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွင်ဘဲလားဆိုတော့ မကသေးပါဘူး။ ဘုရားလောင်း ဗျာဒိတ်ခံတဲ့နေ့ ၊ ဖွားမြင်တော်မူရာနေ့၊ ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူရာနေ့တွေကလည်း “ကဆုန်လပြည့်နေ့” တွေချည်းပါဘဲ။ ကဆုန်လပြည့်နေ့အကြောင်း ကျွန်တော် လင့်ခ်တစ်ခု ရှယ်ထားပါတယ်။ အဲဒီမှာ အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုကြပါကုန်။ https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm?hc_location=timeline
ကျွန်တော် အခုပြောချင်တဲ့ အကြောင်းလေးကတော့ “ဘုရားအနေကဇာတင်” တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ခုခေတ်တော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အရပ်ဒေသမှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဆုန်လပြည့်နေ့ရောက်ရင် (နှစ်တိုင်းမဟုတ်တောင်မှ) အိမ်က ဘုရားကို ဘုန်းကြီး (၅)ပါးလောက် ပင့်ပြီး “အနေကဇာ” တင်ကြတဲ့အလေ့ ရှိကြတယ်။ အိမ်တိုင်းမဟုတ်ပေမယ့် အတော်များများ လုပ်လေ့ရှိကြတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ချို့ အိမ်ထောင်ပြု ၊ အိမ်ရာတည်ထောင်ကြတဲ့ အခါ ၊ အိုးသစ်အိမ်သစ်မှာ ဘုရားဆင်းတုအသစ်ကို တည်ထားကိုးကွယ်ရာမှာလည်း အနေကဇာ တင်ပြီးမှ ကိုးကွယ်မှုကို ပြုကြပါတယ်။ အနေကဇာတင်တယ် ဆိုတာဘာလဲ ? ။ ခုခေတ်လူငယ်တွေ သိသူလည်း ရှိ/ မသိသူလည်း ရှိပေမယ်။မသိသူများအတွက် ပြန်လည် ဖောက်သည်ချပေးလိုက်ပါတယ်။ ——————————————————————————————————————————–
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက အခုလို ကဆုန်လပြည့်နေ့တစ်နေ့မှာ အိမ်ကဘုရားကို အနေကဇာ တင်မယ် ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးတွေ သွားပင့် ၊ ဆွမ်းကပ်ဖို့ ချက်ကြပြုတ်ကြနဲ့ တစ်အိမ်လုံး အလုပ်ရှုတ်နေကြတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့်အသက် (၈)နှစ် (၉)နှစ်လောက်ဘဲ ရှိဦးမယ်။ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဉာဏ်သိပ်မကောင်း ၊ သိပ်ထက်ထက်မြက်မြက်မရှိပေမယ့် - စဉ်းစားတွေးခေါ်ရတာ ၀ါသနာ ပါတယ်။ စဉ်းစားဖို့ စကားလုံးတစ်လုံးရလာရင် တစ်နေကုန် မဆော့ဘဲ ထိုင်စဉ်းစားနေတတ်တဲ့ အကောင်မျိုး။
Posted in ဓမ္မစကား, သိဖွယ် မှတ်ဖွယ် စဉ်းစားဖွယ် | Tagged ကဆုန် လပြည့်နေ့, ဗုဒ္ဓနေ့, မဟာလူသား ဗုဒ္ဓ, အနေကဇာတင် မင်္ဂလာ, အနေကဇာတိ သံသာရံ, ညောင်ရေသွန်းပွဲ | Leaveacomment	# ကုသိုလ် အကုသိုလ် ?Published August 2, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	ကျွန်တော် စာမရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားပြီဆိုတာ ဆိုဒ်ကို မှန်မှန်ဝင်ဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ သတိထားမိကြမှာပါ။ အကြောင်းပြချက်တွေကတော့ အများကြီးပေါ့ဗျာ။ ထုံးစံအတိုင်း “ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းလို့” ၊ “စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံးပန်းနေရလို့” ၊ “အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်တွေ မကောင်းလို့” စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေ ပေးမယ်ဆိုရင် ပေးလို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆင်ခြေတွေပါ။ အမှန်ကတော့ အချက်(၂)ခုကြောင့်ပါ။ နံပါတ်(၁) အချက်က စာရေးရတာ“ပျင်း” နေလို့ပါ။ စာရေးရတာ နဲနဲ ပျင်း သွားပြီ။ ဘလော့ဂ် စ, လုပ်ခါစကတော့ တက်တက်ကြွကြွပေါ့ဗျာ။ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် တင်ပြီး နောက်ထပ် ဘာအကြောင်း ရေးရမလဲ စဉ်းစားလိုက် ၊ ခေါင်းစဉ်လေးရလာရင် စိတ်ကူးထဲမှာ စာစီလိုက် ၊ ချရေးလိုက် ၊ အချောသတ်ပြီး ပို့စ်တင်လိုက် နဲ့ ပေါ့ဗျာ။ ဖတ်တဲ့ လူတွေကလည်း သိပ်ကောင်းတယ် ၊ သိပ်ကြိုက်တယ် ဆိုပြီး မြှောက်ပေးဆိုတော့ တစ်လကို အနည်းဆုံး ပို့စ် (၄) ခု (၅) ခုကတော့ အသာလေးပေါ့ဗျာ။ နောက်တော့ လူ့သဘာဝအတိုင်း အပျင်းက နဲနဲဖက်လာတယ်။ ငြီးငွေ့စပြုလာတယ်။ ဒါကြောင့် စာရေးကြဲလာတယ်။
နံပါတ်(၂) အချက်ကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဒုက္ခပေးနေတဲ့ လူတစ်ချို့ ကြောင့်လဲ စာသိပ်မရေးဖြစ်တော့တာပါ။ ကျွန်တော် ဒီလို ဘလော့ဂ်တွေကို စိတ်ပါလက်ပါ ရေးနေတဲ့ အချိန် လူအများစုက အားပေးအားမြှောက် လုပ်ပေးနေတဲ့ အချိန် ၊ ကိုယ့်နာမည်လေးလည်း ကြီးသင့်သလောက် ကြီးလာတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဒုက္ခ မရောက် ရောက်အောင် နည်းမျိုးစုံ နဲ့ ဒုက္ခပေး နေတဲ့ လူတွေလည်း ပေါ်လာတယ်။ နာမည်တွေ အမျိုးမျိုးမို့ (လူတွေလို့သာ ပြောရတာပါ ၊ အမှန်က (၂)ယောက်ထဲပါ ၊ နာမည် အတုတွေကတော့ အများကြီးပေါ့ဗျာ။ ဘယ်သူတွေဆိုတာ နာမည်ရင်းတွေနဲ့ တိတိကျကျ သိပါတယ်၊ ဗေဒင် နဲ့ လောကီဂမ္ဘီရပညာကို လိုက်စားလာခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းက (၃၅)နှစ်လောက် လိုက်စားခဲ့ရင်းနဲ့ တတ်မြောက်ထားတဲ့ နည်းလေးတွေပေါ့ဗျာ)
Posted in ဓမ္မစကား	# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်းPublished June 13, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများ ကြားဘူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆုံးအမလေး တစ်ခုပါ။
“စကား (၆) ခွန်း ၊ လူ၌ထွန်း ၊ (၄) ခွန်းကိုရှောင် ၊ (၂) ခွန်းဆောင်” တဲ့။ တချို့ကလည်း (၄) ခွန်းကိုပယ် ၊ (၂) ခွန်းထယ်” တဲ့ ။ ကာရံ ညီအောင် ညှိကြတာပါဘဲ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ စကား (၆) ခွန်းမှာ (၄) ခွန်းကို မပြောနဲ့၊ အကျိုးမရှိဘူး ၊ (၂) ခွန်းသာ ပြောကြလို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့ စကားပါ။
ဘုရားရှင်ဟာ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော် မူသည့် အချိန်ကနေ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသည့်တိုင်အောင် စကား (၆) ခွန်းအနက် ပယ်ရမယ့် (၄)ခွန်းကို လုံးဝမပြောခဲ့ဘဲ ကျန်တဲ့ (၂)ခွန်းကိုသာ တစ်သက်တာပတ်လုံး “ဆောင်” သွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ စကားကြီး (၆) ခွန်းကတော့ -
(၁) ဟုတ်မှန်ခြင်း / မဟုတ်မှန်ခြင်း (၂) အကျိုးရှိခြင်း / အကျိုးမရှိခြင်း (၃) အပြောခံရသူ နှစ်သက်ခြင်း / မနှစ်သက်ခြင်း (၃)မျိုးအပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ တွဲစပ်လိုက်တော့ – စကားတစ်ခုဟာ
(၁) ဟုတ်မှန်ခြင်းမရှိ ၊ အကျိုးလည်းမရှိ ၊ အပြောခံရသူလည်း မကြိုက်တာက တစ်ခု။
(၂) ဟုတ်မှန်ခြင်းမရှိ ၊ အကျိုးလည်းမရှိ ၊ အပြောခံသူကတော့ ကြိုက်တာက တစ်ခု။
(၃) ဟုတ်မှန်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် အကျိုးမရှိ ၊ အပြောခံရသူလည်း မကြိုက်တာက တစ်ခု။
(၄) ဟုတ်မှန်တယ် ၊ ဒါပေမယ့် အကျိုးမရှိ ၊ အပြောခံရသူကတော့ ကြိုက်တယ်က တစ်ခု။
(၅) ဟုတ်မှန်တယ် ၊ အကျိုးလည်း ရှိတယ် ၊ အပြောခံရသူကလည်း ကြိုက်တယ်က တစ်ခု။
(၆) ဟုတ်မှန်တယ် ၊ အကျိုးလည်း ရှိတယ် ၊ အပြောခံရသူကတော့ မကြိုက်ပြန်ဘူး က တစ်ခု။
ဒီတော့ ဒီစကားလေးတွေကို ပြန်ချဲ့ကြည့်ရအောင် ။
Posted in ဓမ္မစကား	# အသိတရား နှင့် တရားအသိPublished December 12, 2009 | By tharawon	ယခုတင်ဆက်မည့်ဆောင်းပါးသည် http://tharawon.baydathukhuma.com/ မှ “ဆရာသရ၀ဏ်” ၏ Post တစ်ခုကို စာရေးသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏ တွေးခေါ် ယူဆချက်ဖြင့် ကိုက်ညီပြီး သဘောကျ နှစ်ခြိုက် မိသောကြောင့် မျှဝေခံစားနိုင်ရန် ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရေး ဆောင်းပါး သက်သက် ဖြစ်ပါသည်။ ဗေဒင်ဆောင်းပါး မဟုတ်ပါ။
မူရင်းဆောင်းပါးကို http://tharawon.baydathukhuma.com သို့ ကလစ်နှိပ်ပြီး သွားရောက် ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
Posted in ဓမ္မစကား | Tagged Buddhist's Talks, ဓမ္မစကား, အသိတရား နှင့် တရားအသိ |6Comments	# ၀ဋ်Published November 30, 2009 | By dr.tin bo bo	.
Posted in ဓမ္မစကား | Tagged Buddhist's Talks, ဓမ္မစကား | 14 Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,884)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,996)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,933)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,422)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,471)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,598)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,626)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,990)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,318)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,277)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,113)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,058)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,855)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,818)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,305)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,146)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,836)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,510)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,199)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,187)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,687)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,686)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,556)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,270)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,254)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,921)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,714)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,482)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,033)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !